फिल्म सम्पादनमा गौतमको दशक - Naya Patrika
फिल्म सम्पादनमा गौतमको दशक
काठमाडौं, १५ मंसिर | मङि्सर १५, २०७४
म्युजिक भिडियो निर्देशक बन्ने चाहनाले फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका गौतम राज खड्का अन्ततः फिल्म सम्पादक बने । ०६४ सालमा अञ्जानमै फिल्म क्षेत्रप्रति आकर्षित भएका उनले बिस्तारै भिजुअल एडिटिङको महत्व र ज्ञान हासिल गरे ।
फिल्म क्षेत्रमै कार्यरत उत्तमकुमार खड्काको माध्यमबाट फिल्म सम्पादक विपीन मल्लकोमा पुगेका गौतमले सुरुको ६ महिना कम्प्युटर छुन पनि पाएनन् । विपीनको सहायक भई काम गर्दागर्दा उनलाई भिजुअल सम्पादनमा रस बस्यो । त्यसपछि उनले बिस्तारै सम्पादन सिक्दै गए । सम्पादनसँगै ग्राफिक्स र भिएफएक्स पनि बुझ्दै गए । ‘सुरुमा केही आउँदैनथ्यो । बिस्तारै रुचि बढाउँदै गएँ, सबै कुरा बुझ्दै गए“,’ गौतमराज भन्छन्, ‘अहिले त फिल्म सम्पादन मेरो पेसा नै भइसक्यो ।’ विगत १० वर्षदेखि फिल्म सम्पादन कार्यमा व्यस्त रहेका गौतम अझ बढी काम गरेर सफलता चुम्न चाहन्छन् ।
सुरुमा विपीन मल्लसँग ‘भुल्नै सकिनँ’ फिल्ममा सहायक सम्पादक भई काम गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै फिल्ममा सहायक गरे । प्रताप सुब्बा निर्देशित ‘याद तिम्रो आयो’बाट फुल सम्पादक बनेका उनले त्यसपछि मदन घिमिरेको ‘बाउन्सर’, दीपक श्रेष्ठको ‘रङ वे’, उज्जल घिमिरे निर्देशित ‘वडा नंं. ६’, जगदीश्वर थापा निर्देशित ‘राधे’, एन बी मर्हजनको ‘सकस’, वीरेन्द्र हमालको ‘सरांक’, नारायण मैनाली निर्देशित ‘दीप ज्योति’, सोभित बस्नेतको ‘बाबु कान्छा’, दयाराम दाहालको ‘लै बरी लै’लगायतका दर्जनभन्दा बढी फिल्म सम्पादन गरिसकेका छन् ।
कतिपयमा फिल्म सम्पादन भनको सट काट्नु र जोड्नु मात्र हो भन्ने गलत बुझाइ रहेकोमा गौतमको गुनासो छ । ‘फिल्म सम्पादन काट्नु र जोड्नु मात्रै होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रविधियुक्त कला हो । सम्पादकले फिल्मलाई निकै चुस्त र कसिलो बनाउन सक्छ । हामीकोमा यो कुरा कतिपयले बुझेका छैनन् ।’
वडा नं. ६ बाट चारवटा अर्वाडमा उत्कृष्ट पाँच सम्पादकमा परे पनि अवार्ड जित्ने चाहना भने पूरा भएको छैन, उनको । भन्छन्, ‘कुनै दिन राष्ट्रप्रमुखको हातबाट सर्वोत्कष्ट सम्पादकको अवार्ड जित्ने सपना छ, मेरो ।’